कपिलवस्तुमा ७० लाख बढि रकम अनियमितताको नाइकेमा बुद्धभुमिका अधिकारी रहेको पुष्टि – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर कपिलवस्तुमा ७० लाख बढि रकम अनियमितताको नाइकेमा बुद्धभुमिका अधिकारी रहेको पुष्टि
कपिलवस्तुमा ७० लाख बढि रकम अनियमितताको नाइकेमा बुद्धभुमिका अधिकारी रहेको पुष्टि
साउन १५ गते
कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभुमि नगरपालिका वडा नम्बर ९ गब्दहवा स्थित बुद्ध यशोधरा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ । जसमा बनका कोषाध्यक्ष समेत रहेका शशि अधिकारी मुख्य नाइके मध्य एक रहेको पुष्टि भएको छ । सामुदायिक बनको कोषाध्यक्ष रहेका अधिकारीले बनको हिसाव किताव हेर्ने सबै जिम्मा पाएकोमा उनी आफनै घोटला गरेको पाइएको हो ।
उनले सामुदायिक बनभित्र बन कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई मिलाउनु पर्छ, पैसा दिनुपर्छ भन्दै लाने गरेको सामुदायिक बनकै एक सदस्यले नाम नबताउने सर्तमा बताइन । अधिकारीले ठेकेदारसगं मिलेर बनलाई यो अवस्थामा पु¥याएको समेत बताए । साथै अधिकारीले रातको समयमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासि गर्ने गरेको समेत पाइएको छ । उनले अवैध रुपमा डम्पीङ गरेको स्थानिय बताउछन ।
सबैभन्दा बढी घोटला भएका शिर्षकहरुः
वन हेरालुको तलब (आ.व. ०७४।७५)
आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा सामुदायिक वनले अडिट रिपोर्टमा वन हेरालुको तलब ८ लाख ६४ हजार खर्च देखाएको छ । तर वर्ष भरि बन हेर्ने हेरालु २ जना छन, उनीहरुको तलब मासिक ५ हजार मात्र छ । २ जना हेरालुको वर्षदिनको तलब १ लाख २० हजार हुन्छ । तर अडिट रिपोर्टमा एक वर्षको रकम ८ लाख ६४ हजार देखाईएको छ । कोषाध्यक्ष सशी अधिकारीले भने १२ हजारका दरले रकम भुक्तानी गरेको बताएका छन ।
कार्यालय सहयोगी (आ.व. ०७४।७५)
सोही आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्टमा कार्यालय सहयोगी तलब १ लाख ४४ हजार खर्च भएको देखाईएको छ । तर कार्यालय सहयोगी आफुले उक्त रकम अहिले सम्म नपाएको बताउँदै गुनासो पोखेकी छिन । यस शिर्षकमा पनि बन समितिले दिएको दाबी गरेको छ ।
बाटो निर्माण (आ.व. ०७५।७६)
आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा सामुदायिक वनले बाटो निर्माणका लागि अडिट रिपोर्टमा २४ लाख ८२ हजार ३ सय १० खर्च भएको देखाएको छ । जुन बाटो आर्थिक वर्ष ०७५।७६ मा नदि जन्य पदार्थ निकासीका लागि बुद्धभूमि नगरपालिकाबाट अगिया खोलामा ठेक्का हुँदा खडका काष्ठ तथा फर्निचर सप्लार्यले बढी रकम कबोल गरेको थियो । सोही क्रममा स्थानियको माग अनुसार उक्त ठेक्का हाता पार्ने ठेकेदारले बाटो निर्माणको लागि लागानी गरेको ठेकेदार राजु खड्काले रातो प्रेसको रिर्पोटमा बताएका छन । उनका अनुसार बाटो निर्माणमा करिब १५ लाख लागेको बताएका छन । तर सोही बाटो निर्माण बन समितले निर्माण गरेको भन्दै बनका अध्यक्ष गिरीधारीलाल थारु, सचिव सुसिला राना र कोषाध्यक्ष सशी अधिकारीले अपुष्ट दाबी गरेका छन ।
वन हेरालु तलब (आ.व. ०७५।७६)
त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५।७६ मा सामुदायिक वनले अडिट रिपोर्टमा वन हेरालुको तलब ८ लाख ६४ हजार खर्च देखाएको छ । तर वर्ष भरि बन हेर्ने हेरालु २ जना छन, उनीहरुको तलब मासिक ६ हजार मात्र छ । २ जना हेरालुको वर्षदिनको तलब १ लाख ४४ हजार आउँछ । तर अडिट रिपोर्टमा एक वर्षको रकम ८ लाख ६४ हजार कसरी पुग्यो त ।
कार्यालय सहयोगी तलब (आ.व. ०७५।७६)
सोही आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्टमा कार्यालय सहयोगी तलब १ लाख ४४ हजार खर्च भएको देखाईएको छ । तर कार्यालय सहयोगीलाई उक्त रकम दिईएको छैन ।
वन हेरालु तलब (आ.व. ०७६।७७)
त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६।७७ मा सामुदायिक वनले अडिट रिपोर्टमा वन हेरालुको तलब ४ लाख ३२ हजार खर्च देखाएको छ । तर वर्ष भरि बन हेर्ने हेरालु २ जना छन, उनीहरुको तलब मासिक ६ हजार मात्र छ । २ जना हेरालुको वर्षदिनको तलब १ लाख ४४ हजार आउँछ । तर अडिट रिपोर्टमा एक वर्षको रकम ४ लाख ३२ हजार कसरी पुग्यो त ।
यसरी हेर्दा माथिका ति शिर्षकमा खर्च बढी देखाएको पाइएको छ । स्थानिय उपभोक्ताहरुको भनाई अनुसार सो समितिले ४ वटा शिर्षकमा मात्रै ३० लाख भन्दा धेरै हिनाबिना गरेको भन्दै हाल सम्म करोड भन्दा बढी रकम घोटला हुनसक्ने अनुमान गरेका छन । तर वन समितिका पदाधिकारीले भने आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्न मानेनन बरू ढाकछोप गर्न तिर लागेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा अडिट रिपोट लुकाईएको उपभोक्ताहरूको आरोप छ भने अर्को तर्फ नक्कली बिल बनाई लाखौँ रकम हिनाबिना पारेको समेत उपभोक्ताको गुनासो छ ।